သမီးလေးရဲ့ (၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ မွေးကင်းစ အရွယ်က ဓာတ်ပုံလေး တွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့တဲ့ အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်း – Cele Posts
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် ဖြစ်ကြတဲ့ အဆိုတော် အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်းတို့ ကတော့ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ လက်ထပ် ခဲ့ကြပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ ပျော်ရွှင်စရာ ဘဝလေးကို တည်ဆောက် ထားကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် (၉) နှစ်နီးပါးမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက်ကို မွေးဖွားထားတဲ့ အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်သလို သမီးလေး အတွက်လည်း တာဝန်ကျေတဲ့ မိဘကောင်းတွေ အဖြစ် ရပ်တည်နေကြ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ ကတော့ အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်းတို့ရဲ့ သမီးလေး ကေသရီအနဂ္ဂရဲ့ (၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်းတို့က မွေးကင်းစ အရွယ်က ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ “လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်.. ဒီနေ့ 27.11.2020 ❤️❤️ Happy 3rd Birthday သမီးလေး 🎉🎉 အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်မှုတွေကို ငါတို့ဘဝထဲကို ယူဆောင်လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်!! ဖေဖေနဲ့မေမေ အရမ်းချစ်တယ်!! May God bless & protect you ကေလလေး!! ❤️❤️” ဆိုပြီး အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်းတို့ ကတော့ နောက်ထပ်ရင်သွေးယူဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးပဲ သမီးလေး ကေသရီအနဂ္ဂအပေါ်မှာသာ အချစ်တွေ ပုံအောပေး အပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနဂ္ဂနဲ့ သံသာဝင်း တို့ မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သမီးလေးရဲ့ (၃)နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ မှေးကငျးစ အရှယျက ဓာတျပုံလေး တှနေဲ့အတူ မှေးနေ့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေးခဲ့တဲ့ အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျး
ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျ ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျ ဖွဈကွတဲ့ အဆိုတျော အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျးတို့ ကတော့ (၂၀၁၂) ခုနှဈမှာ လကျထပျ ခဲ့ကွပွီး အနုပညာ အလုပျတှေ လုပျကိုငျရငျးနဲ့ နှဈကိုယျတူ ပြျောရှငျစရာ ဘဝလေးကို တညျဆောကျ ထားကွသူမြား ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျသကျ (၉) နှဈနီးပါးမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေး တဈယောကျကို မှေးဖှားထားတဲ့ အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျးတို့ ဇနီးမောငျနှံ ကတော့ အနုပညာ အလုပျတှကေိုလညျး လုပျကိုငျသလို သမီးလေး အတှကျလညျး တာဝနျကတြေဲ့ မိဘကောငျးတှေ အဖွဈ ရပျတညျနကွေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ နိုဝငျဘာလ (၂၇) ရကျနေ့ ကတော့ အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျးတို့ရဲ့ သမီးလေး ကသေရီအနဂ်ဂရဲ့ (၃) နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သမီးလေးရဲ့ မှေးနမှေ့ာ မိဘနှဈပါးဖွဈတဲ့ အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျးတို့က မှေးကငျးစ အရှယျက ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့အတူ “လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈ.. ဒီနေ့ 27.11.2020 ❤️❤️ Happy 3rd Birthday သမီးလေး 🎉🎉 အကောငျးဆုံးပြျောရှငျမှုတှကေို ငါတို့ဘဝထဲကို ယူဆောငျလာပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ!! ဖဖေနေဲ့မမေေ အရမျးခဈြတယျ!! May God bless & protect you ကလေလေး!! ❤️❤️” ဆိုပွီး အမှတျတရ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျးတို့ ကတော့ နောကျထပျရငျသှေးယူဖို့ အစီအစဉျ မရှိသေးပဲ သမီးလေး ကသေရီအနဂ်ဂအပျေါမှာသာ အခဈြတှေ ပုံအောပေး အပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အနဂ်ဂနဲ့ သံသာဝငျး တို့ မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမွဲတမျး ပြျောရှငျခမျြးမွပေ့ါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဘေးနားကမင်းသား မြင့်မြတ်ကိုတောင် မေ့နေတဲ့ အထိ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ မျက်နှာပြောင် နေတဲ့ ချစ်စဖွယ် ခေးဆက်သွင်ရဲ့ဗီဒီယို